Ixesha kunye nabahlobo 39
Ngokunyaniseka ukucinga, ukunyanisa ngentetho, nangokwenza isenzo. Ukuba indoda ayicingi buxoki, yinyani, iyathetha, aluxoki. Xa ujonga ubonakala ungekho sikweni kunye nokuhleba okungafanelekanga emhlabeni, le nkcazo ayizukubonakaliswa ziinyani. Nangona kunjalo, iyinyani. Akukho namnye unqwenela ukunyeliswa; Akukho mntu unqwenela ukuba axokiswe; kodwa uninzi lwabantu luyaxoka kwaye luhleba abanye. Mhlawumbi ubuxoki buncinci, 'buxoki mhlophe'; mhlawumbi ukuhleba kwenziwa kuphela ngendlela yokuhleba, ukwenza incoko. Nangona kunjalo, ubuxoki bubuxoki, nangona kunjalo kunokuba yinto yombala okanye ukubizwa. Inyani yile, kunzima ukufumana umntu ocinga ngokunyaniseka, othetha ngenyaniso kwaye enze ngokusesikweni. Umntu unokuvuma ukuba le ngxelo iyinyani ngokubanzi kwabanye, kodwa kunokwenzeka ukuba ayikhanyele xa isetyenziswa kuye. Ukwala kwakhe, nangona kunjalo, kuyangqina ukuba iyinyani imeko yakhe, kwaye ulixhoba lakhe. Umkhwa wendalo yonke wokukhala ngokuchasene nobuxoki kwaye ugxeka ukunyelisa ngokubanzi, kodwa unganciphisi iminikelo yethu kunikezo, unobangela kwaye ugcina inani elikhulu kakhulu kunye nesitokhwe sempahla ekujikelezeni okusebenzayo, kwaye kubangela abo banento yokwenza noncedo yenzakale okanye wenzakale ngobuxoki nokunyelisa.
Ubuxoki kwilizwe lokuziphatha kukuthini ukubulala okubonakalayo emzimbeni wenyama. Lowo uzama ukubulala uya kubulala umzimba wenyama. Lowo uxoka ngomnye wenzakalise okanye azame ukutshabalalisa isimilo somnye lowo. Ukuba umntu obulewe engumbulali angafumani mvume yokungena ngesixhobo emzimbeni wexhoba lakhe, akayi kuphumelela kwilinge lakhe lokubulala, kwaye kunokwenzeka ukuba xa ebanjiwe uyakufumana isohlwayo sesenzo sakhe. Ukuthintela ukungena emzimbeni wento yesixhobo sokubulala, ixhoba ekufanele ukuba likhuselwe ngubo yengubo okanye into ethintela uhlaselo. Umbulali kwilizwe lokuziphatha usebenzisa ubuxoki, ubuxoki, ukunyelisa njengezixhobo zakhe. Ngazo uhlasela ubuni bexhoba lakhe. Ukuze azikhusele kwizixhobo zombulala, ixhoba kufuneka lixhobe kuye. Ukunyaniseka ekucingeni, ukunyaniseka ngentetho, kunye nokusesikweni kwezenzo, kuya kwakha ngaye umntu ongahlaseli izixhobo ohlaselayo. Esi sikrweqe asibonwa, kodwa ubuxoki okanye ukunyelisa akubonakali, okanye akubonakali. Nangona zingabonwa, ezi zinto ziyinyani ngakumbi kunepistol, isitshetshe, okanye izixhobo zentsimbi. Ubuxoki okanye isityholo asinakuluchaphazela ubume boluntu oligcinwe ngokunyaniseka nokunyaniseka, kuba ukunyaniseka nokunyaniseka zizimilo ezisisigxina; Ubuxoki kunye nokuhleba zizinto ezichasene nazo, kwaye zizinto ezimbi ezingenamsebenzi. Ubuxoki abunoyisa enyanisweni. Ukunyelisa akunakukoyisa ukunyaniseka. Kodwa ukuba endaweni yokunyaniseka kwingcamango yakhe indoda icinga ubuxoki kwaye ithethe ubuxoki, ukucinga kwayo kunye nokuthetha kwenza ukuba umlinganiswa wakhe abe sesichengeni sokungabi nampazamo kubuxoki obuhle okanye ukunyelisa okujolise kuye. Ukuba, nangona kunjalo, umlingiswa wakhe ukhuselwe sisikrweqe esenziwe ngokunyaniseka kwakhe ekucingeni nasebunyanisweni ngentetho, ke izixhobo ezijolise kuye ziya kuphinda zenzeke kulowo uziphosileyo kwaye yena ngokwakhe uya kuva ubunzima ngesenzo sakhe. Nguwo lowo umthetho kwilizwe eliziphethe kakuhle. Umntu owenzakalisayo omnye ngobuxoki nangokuhleba, uya kuphulukana nobubuxoki bobuxoki, nangona isohlwayo sinokujikwa. Kubhetele ukuba umntu abulale omnye umntu, aze naye aphulukane naye kwangelo xesha, nakwikratshi lokunyaniseka kunye nenyani yexhoba, kuba usengozini yokubona kwaye uya kuthi kungekudala abubone ubungendawo bezingcinga kunye nezenzo ezigwenxa. Kwangoko angafundi ukuba angaxoki, angenzi ngokungalunganga kuba engenakwenza into embi ngaphandle kokuzenzakalisa. Emva kokuba efundile ukuba akaze enze into imbi ukuba uyakuphepha isohlwayo sesiphosakeleyo, kungekudala uyakufunda ukwenza okulungileyo kuba kulungile kwaye kufanelekile.
"Ubuxoki obuncinci" obuncinci kunye nokuhleba okungeyizo izinto ezincinci ezingenabungozi ezibonakalayo njengamehlo angabonakaliyo. Yimbewu yokubulala kunye nolunye ulwaphulo-mthetho, nangona ixesha elininzi linokungenelela phakathi kokutyalwa kwembewu kunye nokuvunwa kweziqhamo.
Xa omnye exoka ubuxoki obungakhange butholakale, ngokuqinisekileyo uya kuthetha omnye, nomnye, de ufumaneke; kwaye uba lixoki elilukhuni, eliqinisekisiweyo kumkhwa. Xa umntu exoka, uhlala exelela omnye ubuxoki ukuba afihle into yakhe yokuqala, aze okwesithathu afihle abo babini, njalo njalo de kube ubuxoki bakhe buyaphikisana kwaye bema njengamangqina aqinileyo kuye. Okukhona ephumelela ngakumbi kokukhona esongeza kwinani lobuxoki bakhe, kokukhona esiya etyhafile kwaye ecinezelekile xa aba bantwana bengcinga yakhe bebizelwa ukunikela ubungqina ngokuchasene naye. Umntu ozikhusela ngokunyaniseka, ukunyaniseka, ubulungisa, kwingcinga yakhe nakwintetho nakwisenzo, akayi kukhusela nje kuhlaselo lobuxoki kunye nokunyelisa; Uza kufundisa ukuba angamhlaseli njani abo bangamhlasela, nendlela abazikhusela ngayo ngesixhobo esingabonakaliyo kodwa esingenako ukuhlasela. Uya kuba yiphilanthropist yokwenyani ngenxa yamandla okuziphatha abanye abaye bakhuthazeka ukuba baphuhlise. Uya kuba ngumguquki wokwenyani, ngokumiselwa kokunyaniseka, ukunyaniseka kunye nobulungisa kwingcinga nentetho. Ke ngolwaphulo mthetho oluyekayo, izindlu zoluleko ziya kupheliswa kwaye zichithwe, kunye neengqondo ezisebenzayo, umntu uya kuba noyolo kwaye uyakuqonda ukuba yintoni inkululeko.